भिरिङ्गी कस्तो रोग हो ? लक्षण र उपचार - ज्ञानविज्ञान
मानिसको यौन आदतमा निर्भर रहने भएकाले यौन रोग कुनै वर्ग वा समुदायमा सीमित नरहन सक्छ। यौन सम्पर्कका क्रममा अथवा असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारणले सर्ने रोगलाई यौन रोग भनिन्छ।
नेपालमा रहेको देखिने एक यौनरोग सिफिलिस हो। यसलाई नेपालीमा भिरिङ्गी भनिन्छ।यस्तो रोग घुमिरहने र छाडा यौन स्वभाव भएका व्यक्तिलाई यसको संक्रमण ज्यादा हुन्छ। सिफिलिस लागेको व्यक्तिसँगको यौन सम्पर्कपछि केही दिनमा पुरुषको लिंगमा घाउजस्तो देखापर्छ। केही दिनमा कतिपयको आफैँ निको भएर जान्छ भने कतिपयले एन्टिबायोटिक औषधि खाए पुग्छ। पुरुषका कारणले महिलामा पनि भिरिङ्गी सर्छ।
यौनांगबाट सेतो पानीजस्तो बग्छ भने गोनेरिया वा क्याइमेडिया लागेको हुनसक्छ। यो रोगबाट संक्रमितसँग असुरक्षित सम्पर्क राखेमा रोग सर्छ र सुरुमा सेतो पानी बग्ने लक्षण देखिन्छ। कतिपयको यौनांग अति गन्हाउने हुन्छ। सिफिलिसमा घाउ नै हुन्छ भने गोनेरियामा घाउ नदेखिने तर सेतो पानी बगिरहने हुनसक्छ। महिलामा यो रोगको संक्रमण अन्य अंगसम्म फैलने जोखिम रहन्छ। गर्भवतीका सन्तानमा यो रोग सर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। नवजात शिशुलाई गोनेरिया सर्यो भने आँखामा समस्या आउने हुनसक्छ।
रोगबाट जोगिने उपयुक्त उपाय नै सुरक्षित यौन सम्पर्क हो। सम्भव भएसम्म एकजना यौन साथीबाहेक अरुसँग संसर्ग नगर्नु उपयुक्त हो। रोग लागिसकेको छ भने दुई जनामध्ये एउटाले मात्रै उपचार गरेर पुग्दैन। पति(पत्नीमध्ये कसैमा यो रोग लागिसकेको छ भने निको नहुन्जेल शारीरिक सम्पर्क नगर्नु राम्रो हो।
यदि कुनै पति(पत्नी आफूहरु बाहेक अन्यत्र शारीरिक सम्पर्क गर्दैनन् भने उनीहरुमा यस्ता रोग लाग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। बरु एचआइभी रगत, सिरिञ्ज लगायतका अन्य क्रियाकलापका कारण सर्न सक्ला तर एड्स बाहेकका अन्य यौनरोग अरु माध्यमबाट सर्दैनन्।
स्थायी यौन साथीसँग मात्रै शारीरिक सम्पर्क गर्ने र सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गरेमा यस्ता यौनरोगको जोखिम निकै कम ह्न जान्छ ।
तपाईंले उपचार गराइसकेको कुरा गर्नुभएको छ, तर तपार्इंले त्यसका बारेमा खुलाएर विस्तृत जानकारी दिनुभएको छैन । चिकित्सकले तपाईलाई VDRL test गराएका हुन सक्छन् । VDRL को पूर्ण रूप Veneral Diseases Research Laboratory हो ।
यो परीक्षण syphilis (भिरिङ्गी) लागेको छ कि छैन भनी छुट्टयाउन गरिन्छ । यो यौनरोग लाग्दा यसको कारक treponema को संक्रमणले शरीरमा बन्ने प्रतिजैविकी (antibodies) मात्रा हेरी रोग छ कि छैन भनी छुट्टयाइन्छ ।
तपाईंको उपचार गर्नुहुने चिकित्सकले पक्कै पनि तपाईंको यौन इतिहासका सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी लिनुभयो होला र तपाईंले पनि स्पष्ट रूपमा बताउनु नै भयो होला भन्ने आशा गर्छु । VDRL परीक्षणले संक्रमणको सक्रियतालाई देखाउँछ ।
उपचारपछि बिस्तारै यी सामान्य अवस्थामा आउँछन् । पेनसिलिन भिरिङ्गीको उपचारका लागि सबैभन्दा राम्रो औषधी मानिन्छ । तपाईंले उपचारका क्रममा कुन औषधी खानुभयो, जानकारी दिनुभएको छैन ।
Don't Miss it इबोला भाइरस के हो ? कसरी सर्छ यो रोग र यसको उपचार
Up Next खुसि हुनको लागि केहि टिप्स